ဒီနေရာတွင်အပန်းဖြေလုပ်ငန်းများနှင့် Holmes ခရိုင်အတွင်းရှိခရီးသွားနေရာများများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
Holmes Vallen မှာတနင်္လာနေ့. ဆိုက်ရောက်. PRO Holmes, Olle Frisk 073-048 45 11.
ဘုံအားလုံးအသက်အရွယ်အဘို့လမ်းလျှောက် (ခေတ်မလိုက်သော – ၎င်းမီးခိုးရောင်)
(လောလောဆယ်မျှလှုပ်ရှားမှု) Holmes တာတမံများကငွေကောက်ခံ. သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ပွဲစားယူခဲ့.
စည်းရုံးရေးမှူး PRO Holmes.
– Holmes Vallen မှာ Fotbollslek / သင်တန်း (Liden အတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ / နွေဦး) မွေးဖွားသားသမီးတို့အဘို့ 2008 နှင့်အထက်.
..စသည်တို့ကိုတစ်ဦးလေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံအသင်း၏ကိုယ်ပိုင် website ကိုကြည့်ရှုပါ: laget.se/knattar.
– Seniorfotboll. တစ်ဦးကအသင်း Holmes Vallen ဈAnundgårdခန့်လေ့ကျင့်ရေးမှာ၎င်း၏ hemmamacther ကစား2ggr./vecka တနည်း Sundsvall အတွက် (ဆောင်းရာသီ) နှင့် Holmes (နွေရာသီ).
စည်းရုံးရေးမှူး Holmes Sportklubb, ပိုပြီးဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ.
Gimåforsအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (updated 150212)
– Vävcirkel, တနင်္လာနေ့ 18:00. info: Margit 0691 - 400 11.
– အစားအစာနှင့်နောက်ဘက်, အင်္ဂါနေ့ 11:00. info: Gunvor 0691-204 45.
– ကွှေထညျ, TIS 18:30 နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11:00. info: Sonja 0692-510 51.
– တုတ်- နှင့်လက်သမားစက်ဝိုင်း, အင်္ဂါနေ့ 18:00 info: Margit 0691-400 11.
– တင်းနစ် / ကျန်းမာရေး, အင်္ဂါနေ့ 18:00. ငါnfo: Ingemar 070-335 50 99.
ကိုယ့်Anundgårdလေ့လာမှုစက်ဝိုင်း (အပြည့်အဝကြိုတင်ဘွတ်ကင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ -15, ဖြစ်နိုင်သမျှအဘို့အတိုးမှတ်ပုံတင်ရန်. ပိုပြီးအခွင့်အလမ်း)
– မိန်းမတို့အဘို့ကြံခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး, နေ 18:00. info: HSK, Gunilla နှင့်မာရီယာ 070-669 78 34.
Times နှင့်ရက်ပေါင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်. Call သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအင်ဖိုအတွက်ဆက်သွယ်ပါ.
ငါးဖမ်း – Holmes ရဲ့ရေထွက်ကုန်ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာထဲမှာငါးဖမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်း. ပိုက်ကနေသီးသန့်အတွက်ဂိမ်းငါးဘို့ angling မှ “ထားယူ”-ရေ.
လှေ, လင်းနို့များနှင့်ရေ – ရေဧရိယာ၌ပင်လယ်မှာအသက်တာကိုပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့အပန်းဖြေမှုအတွက်အပေါများအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်. အထူးသဖြင့်Holmsjönခုနှစ်တွင်သဲကမ်းခြေနှင့်အတူအများအပြားအရပ်တွင်ရေကူးဘို့ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်. အိုင်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏မြေပုံလည်းရှိပါသည်.
Kanotuthyrning – ကနူးနှင့်နောက်တွဲယာဉ်ငှားရမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောရေပေါ်မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းစီးယူ.
Jaktskyttebana – ဗိုက်ကင်းအတွက် Holmes အမဲလိုက်ခြင်း riffle လိုက်နိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ကူးသိမ်းဆည်းထားပါ.
လှုပ်ရှားမှု- နှင့် ski- – Holmes ဝေါ်လဲန်နှင့်ဗိုက်ကင်းelljusspårအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း, နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ.
Allbergsbacken – Holmes elbelysta pulk- နှင့် toboggan. ထိုရက်သတ္တပတ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖွင့်ပါ!
Vettenbacken – သာ. ကြီးနှစ်ခု LIFT နှင့်တောင်စောင်းနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားအယ်လ်ပိုင်းများအတွက်ဒေသခံမိသားစုတောင်စောင်း. တစ်ဦးကကြင်နာတက်နှင့်အနည်းငယ်ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့ piste.
စနိုးမိုဘီလ်နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – Draka တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့စနိုးမိုဘီလ်ကလပ်ကိုထိန်းသိမ်းထား အဲဒီမှာ Holmes ခရိုင်န်းကျင်တဝိုက်ကြီးမြတ်စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်လမ်းကြောင်း. သူတို့နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်မျှဝေနိုင်ပါသည်- နှင့် MC အကျိုးစီးပွားနှင့်ပိုပြီးဆောင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ထက် ပို. ရ.
Österström၏လွှဲ – အဟောင်းကိုသစ်စက်ခေတ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမှတ်တရများနှင့်ပြည့်ဝ၏သာယာလှပပတ်ဝန်းကျင်၌ကျင်လည်. Österströms Estate လည်းထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများပူဇော်, gudningar နှင့်ချွေးပေါင်းအိမ် horny.
Sandsnäsetsစခန်းအပေါ်တက်ကြွစွာ Teter – Sandnäsetရှည်လျားသဲကမ်းခြေတွင်ရေကူးခြင်းနှင့်စခန်း, ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောတက်ကြွအီတဲ့အရေအတွက်ကသာကမ်းလှမ်း. Holmes ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးမှာဂျက်မကြိုးစားအဘယ်ကြောင့်!?
TIVSJÖဆိတ်သငယ်ကိုတစ်ဦးခရီးစဉ်ကို ယူ. ပေါက်နှင့်အတူကြောင်ကြည့်ရှု, နွားသငယ်, getter, ဝက်, ရယူ, ကြက်ဘဲ, ယုန်, မြင်း, ကြက်ဆင်, duck နှင့် minipig. ဤတွင်summercaféနေကြတယ်, အနုပညာပြပွဲနှင့်ဆိတ်သငယ်ကိုဒိန်ခဲသို့မဟုတ်gettvålarကိုဝယ်ခြင်းငှါအခွင့်အလမ်း. တိုင်းပြည်ကိုအသက်ပိုကြီးတဲ့ဆေးထိုး, သင်ကူညီနေတဲ့ / အပြည့်အဝဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့်အတူအာကာသငှားလို့ရပါတယ်, လှေနှင့်ကနူးရမညျ.
သမိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းပိုမိုမြင်ကွင်းများဖော်ပြထားကြသည်. အခြားအ nyupprustade Storsten boathouses တွေထဲမှာ. အစောပိုင်း 1800 ကနေချိန်းတွေ့ခြောက်လအိမ်တွင်းနှင့်ကျီခဲ့သောတစ်ဦးကတောင်ကြီးတောင်ငယ်စားကျက်. နှစ်ဦးစလုံးအိမ်တွင်းငှားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်, Eldhus နှင့်ဖောင်.
19/5: Sundsvall–Ånge (တိုး ...
20-24 maj mellan ca 09:00-15:00 är det förän... ဆက်ဖတ်ရန်